Ukwakhiwa kwekhaya elisha noma ukulungiswa komdala, ukulungisa indlu noma ukulungisa udonga owonakele njalo kuholela ekudingeni ukuqala ukulungiswa. Emashumini eminyaka edlule, umsebenzi wokwakhiwa kwezindonga wawuzoncishiswa. Namuhla lokhu okuhlukile kunomncintiswano ofanelekayo - i-drywall. Lokhu yilapho kuvela khona inkinga: yini engcono - i-plasterboard noma i-plaster?
Ayikho impendulo eyodwa kulo mbuzo. Esikhathini ngasinye, umnikazi kuzodingeka azikhethele yena ukuthi yini ayithenga. Ukuzikhethela kuzobonakala kuphela emva kokubukeza ukufaneleka kanye nokuhlaselwa kwento ngayinye yokwakha.
Lezi zinto zakhiwe ngasekupheleni kwekhulu le-19 eMelika. Kodwa ke akatholanga ukusatshalaliswa kabanzi. Ngokuhamba kwesikhathi, ukukhetha okungcono - i-plasterboard noma i-plaster, abantu abaningi baqala ukukhetha i-gypsum plasterboard. Kusukela phakathi nekhulu leminyaka elizayo, ukusetshenziswa kwayo kuye kwasakazeka emhlabeni jikelele, futhi kubonakala ku-USSR.
I-dryry iyinhlangano yokwakha. Iqukethe amashidi amabili amakhadibhodi kanye nocansi olungaphakathi phakathi kwabo kusukela ku-hard gypsum inhlama. Ikhadibhodi ye-gypsum esetshenziselwa ukushayela, ukulungiswa kwangaphakathi nokudala izingxenye zangaphakathi. Akufanelekile umsebenzi wangaphandle kanye namakamelo anomswakama ophezulu. Yiqiniso, kungenzeka ukukala izindonga endlini yokugezela nge-plasterboard, kodwa emva kweminyaka embalwa ukubukeka kwalezi zindonga kuzoba kubi kakhulu. Ubukhulu emva kweminyaka engu-6-8 yokukhanda kuyodingeka kuphindwe.
Abakhiqizi bakhiqiza amashidi e-gypsum ibhodi ngamanani amathathu ayisisekelo ayisisekelo. Ububanzi bulodwa - amamitha ayi-1200, nobude bungaba ngamamitha angu-2, 2.5 noma amathathu. Ubukhulu beshidi bubukhulu obukhulu: 9.5 noma 12.5 millimeters.
Ukuphendula izicelo zamakhasimende, abakhiqizi basebenze ukukhiqizwa kwezinhlobo ezintathu ze-plasterboard: ama-plasterboard amashidi ajwayelekile (i-GKL), ibhodi le-gypsum elingenawo amanzi (GKLV) nebhodi le-fireproof gypsum (GKLO).
Amashidi angenawo amanzi ahlukaniswa ngokufaka izinto ezikhethekile ngokumelene nefungi zibe yinhloko ye-gypsum. I-Gypsum emakhasini angenasibindi ayathuthukiswa ngobumba futhi iqinisa i-fiberglass. Ngenxa yezici ezingenakuvutha kwamatshe, lezi zitshalo ze-plasterboard ziphikisana nomlilo ovulekile ihora, ngaphandle kokusabalalisa nokubhema. Umthengi angahlukanisa izinhlobo ze-drywall ngokusho kombala wamashidi: uma i-gray, kusho ukuthi i-drywall evamile, ukufaka uphawu oluhlaza kubonisa izinto ezingenawo amanzi, kanti enye i-pink ibonisa ukumelana nomlilo.
Sekuyisikhathi eside izindonga nezinsimbi zifakwe nge- plaster. Lesi yisakhiwo sokwakha esisetshenziselwa ukuqedela ngaphakathi noma ngaphandle kwezindonga, kanye nokushayela. Ngaphansi kwe-plaster kubuye kusho ukuthi ungqimba obunzima olutholakale ngenxa yokuyisebenzisa ezindongeni. Izinhlobo ezintathu ze-plaster zivame ukuhlukaniswa:
Ukusetshenziswa - isetshenziselwa ukulinganisa ubuso bezindonga nokuzivikela emthelela omubi wemvelo. Izindonga zingaphathwa kokubili ngaphakathi nangaphandle.
Okukhethekile - inikeza, ngokungeza izingxenye ezithile, izici ezihlukahlukene: ukusindisa ukushisa, ukubeka umsindo, ukuvikelwa kwe-X-ray, ukuxhuma okuncane.
Ukuhlobisa - esiteji sokugcina sokuqeda izindonga noma ukufakela kunika ukubukeka okukhangayo okukhangayo kwendawo. Kunemibala, isilikhi, iVenetian, itshe kanye nabanye.
I-plaster evamile ingaba nokwakheka okuhlukile: inhlanganisela ye-calcareous, gypsum noma yesamente-isanti.
I-lime yodaka iyinqwaba ye-lime nesihlabathi ngesilinganiso se-1: 4. Ungangeza isamente ngamandla. Inhlanganisela ye-eco-friendly isetshenziswa ngokushesha, isetshenziselwa umsebenzi wangaphandle. Isisindo se-sable-sand in isilinganiso esingu-1: 4 singasetshenziswa ezinhlangothini zangaphakathi nangaphakathi zangodonga. Lelixazululo lizokwazi ukulinganisa amaphutha amakhulu, ungqimba lwe-plaster aluwi iminyaka emashumi embalwa. Inhlanganisela ye-Gypsum isetshenziselwa imisebenzi yangaphakathi. Isigqoko sibushelelezi futhi simhlophe, esifanele ukuqedela kunoma yiluphi uhlobo: iphepha lodonga, ukudweba, amatayela.
Ukuze unqume ukuthi yikuphi okungcono - i-plasterboard noma i-plaster, kuyadingeka ukuthi ufunde mayelana nezinzuzo nezindleko zohlobo ngalunye lwezinto zokuqeda. I-Drywall inezinzuzo eziningi lapho ipulazi ingagcini khona:
Zonke ukuqeda ukusebenza nge-plasterboard zihambisana nokungcola okungenani, njengoba impahla isomile futhi ayidingi umswakama.
Ukuhlanganisa izindonga nalokhu okudingayo akudingi amakhono akhethekile, kwenziwa ngokushesha. Akunzima ukusebenzisa i-drywall kuleso sicu.
Igalari ye-GKL inikeza ukukhishwa okuzwakalayo emsindweni wangaphandle wangaphandle. Ukusetshenziswa kwebhodi elikhethekile elimelana nomlilo gypsum kunikeza ukuvimbela umlilo.
Ikhono le-drywall lokuthola umswakama obangele lenza izindonga "ziphefumule".
Phakathi kwephepha lesikhumba nodonga isikhala esingenalutho sakhiwa, esingasetshenziswa ngenzuzo. Lapho ungafihla ukuxhumana noma ugcwalise inetha.
Amashidi e-Drywall aphethwe kahle. Lokhu kuvumela kusuka kulesi sakhiwo ukuklama ezindongeni nasezindlini zokwakha original.
Njenganoma yiluphi ulwazi, lunezinkinga. Izinkinga ziyi:
Nciphisa isikhala esiwusizo ngaphakathi egumbini, ngoba amashidi axhunyiwe kukhredithi;
Ukwakhiwa kwezindonga ngamabhodi we-gypsum kuyingxenye yomsebenzi wokuqeda: kufanele ugcwalise izigqoko futhi usebenzise izinto zokuqeda;
Izindonga ezenziwe nge-plasterboard azikwazi ukuqhubeka zifakwe eshalofini elisindayo noma kwikhabhinethi, kubalulekile ukubeka ngaphansi kweshidi izakhi ezengeziwe.
I-Plaster ayikho ngaphandle kwesizathu esibizwa ngokuthi indlela endala, efakazelwe yokulinganisa izindonga nokufakela. Kungaba ukuncintisana nezinzuzo ezibonakalayo ze-drywall uma ukhetha indaba: yini engcono - i-plasterboard noma i-plaster? Lezi zinto zihlala zidinga isikhathi eside kangaka, ngoba izinzuzo zamadonga aqoshiwe azikwazi ukunakwa.
Ukuguqulwa kuyinzuzo enkulu ye-plaster. Umsebenzi owenziwa ngokugcina wonke ubuchwepheshe uvumela okungenani iminyaka engamashumi amathathu ukukhohlwa ngezinkinga zokungahambi kahle. Iphephadonga, ukudweba, ukugcoba kuzodingeka ukuthi ubuyekeze kaningi.
Udonga, oluhlanganiswe ne-plaster, luqinile, lubhekene nemithelela, lunokwethenjelwa.
Ungamelana nanoma imuphi umthwalo: ifenisha, ubunjiniyela kagesi noma isithombe esakhiweni esinamandla se-antique.
Igcina indawo yangaphambilini yekamelo, hhayi ekunciphiseni ngamasentimitha ambalwa ohlangothini ngalunye.
Ama-electricians avunyelwe ukusebenzisa izintambo ezingenalutho ezihlangene ezindongeni ezibekiwe.
I-Stucco inhle, kodwa ayikho ngaphandle kweminithi yayo:
Ukufakwa kwezindonga kwenziwa ngokufaka amanzi, ngakho-ke kuhambisane nenhlabathi enkulu.
Ukupaka akuyona umsebenzi olula. Kuthatha isikhathi ukusebenzisa lokho okushiwo, bese uyomisa. Futhi kuphela lapho ungaqala ukuqedela. Kungathatha cishe amasonto amathathu, noma ngaphezulu.
Ukwamukela umsebenzi owenziwe yi-plasterer, ikhasimende lingakwazi ukuyibuka kalula amaphutha. Umqambi angakwazi ukukwazi ukuhambisana nokufaneleka kokuhambisana nobuchwepheshe. Phakathi kwabaningi abakhi abafuna ukuqhuba umsebenzi wokusika. Intengo ngesikhathi esifanayo incike ezingeni lekhono kanye nomthwalo womsebenzi wezobuchwepheshe.
Ukuhlobisa igumbi usebenzisa i-plasterboard
I-plaster inhle futhi ifihla ukungahambi kahle ezindongeni. I-Drywall inamandla kakhulu - ingaba ishintshe isikhala. Lapho ubeka, uthola ibhokisi enezindonga ezibushelelezi ngokuphelele. Umklamo ovela emanzini omile awuyazi imingcele. Izinketho ezivame kakhulu zikhona: ukufakwe kwezinga ezimbili noma ezintathu, amakamelo okwehlukanisa, ukudala amakhekhe noma amakholomu. Ungashintsha noma yiliphi igumbi, ukusuka ekamelweni lokulala kuya egumbini. Imibono enesithakazelo inikezwa yinkosi ngokuhlobisa igumbi lokulala, i-nursery, igumbi lokuphumula.
Izindleko zokupaka kanye nezomile
Ukuqhathaniswa kwentengo ye-plasterboard kanye nezingxenye eziyinhlanganisela ze-plaster kubonisa ukuthi eshibhile kakhulu kokuqukethwe kwesibili cishe kabili. Kodwa kusuka ezintweni ezidingekayo okudingeka ulungiselele ingxube, bese uyifaka odongeni. Ikhadibhodi ye-Gypsum ilungele ukusetshenziswa, ishidi libukeka lihle. Ukuphakamisa nokuhambisa akulula, kulula.
Akunzima ukubala inombolo edingekayo yamashidi e-drywall. Kwanele ukukala indawo yezindonga nokufakwe ekamelweni ngalinye. Kungakwazi ngisho nokukwazi kahle inani elilodwa lepulazi. Kuncike kakhulu esimweni sezindonga. Uma besesimweni esidabukisayo, kuzodingeka ukwandise ukusetshenziswa kwezixhobo. Ngakho-ke, embuzweni wokuthi eshibhile - i-plasterboard noma i-plaster, singasho ngokuqiniseka ukuthi impahla yesibili ingabizi kakhulu.
Izindleko zomsebenzi embozweni we-plasterboard odongeni kanye nokugcoba kwazo cishe kufana. Kukhona enye inkinga: ukuthola inkosi enhle. Yiqiniso, kuzodla okungaphezulu, kodwa umdlalo ufanele ikhandlela.
Kunezinkampani zokwakha ezidinga ukusika, intengo yayo ephakeme kakhulu-kufika ku-$ 4 ngokucubungula imitha ngayinye yesikwele. Kulesi simo, ungacacisi ubude bensimbi. I-plasterer enolwazi ngemali enjalo izosebenza kuphela nge-spatula yamitha kanye nengxenye. Ikhasimende kufanele liqonde ukuthi le ndlela ingcono kuye. Umsebenzi womsebenzi ophezulu ophezulu uzobiza ngaphezulu: kusuka ku-$ 20 kumitha yesikwele.
Hlanganisa izindonga noma ukufakwe ngekhadibhodi ye-gypsum kuyobiza kakhulu. Ngakho-ke, ngokwesilinganiso, ukufakwa kwe-drywall (intengo ngayinye imitha yesikwele) kungaba ngu-$ 5. Kuzodinga imali eyengeziwe ekukhanyiseni amalunga amashidi, ekubhekeni kwe-plasterboard. Kusengabizi kunokuba ubeke phansi.
Ukuqhathaniswa kwalezi zintengo kunika impendulo yombuzo ukuthi inzuzo kakhulu - ipulazi noma i-plasterboard. I-plaster izobiza imali eshibhile.
I-plaster kanye ne-drywall zinezici ezivamile. Ake sihlole ukuthi yiziphi. I-Plasterboard ayiyona ize ngokuthi i- plaster eyomile. Uyakwazi ukulinganisa izindonga ngaphandle kwezinkinga ezingadingekile. Zombili izinhlobo zokwaziswa kokuqedela zenziwa ezakhiweni ezingokoqobo. Ngakho-ke, azilimazi.
Uma siqhathanisa ijubane lomsebenzi, khona-ke umholi ongenakuphikisana uzoba yi-drywall. Ngesikhathi esifanayo ungasebenza nayo kuma-degree angu-+5. I-plaster idinga ukushisa lokushisa kombuso. Uma kuqhathaniswa nokuphila komsebenzi, ubuholi buzohlala ngemuva kwe-plaster. I-caveat encane: uma inqubo yesicelo sayo yenziwa kahle.
Ukuze uqede ngokushesha ukulungiswa, kungcono ukhethe ukufakwa kwe-drywall. Inani ngemitha yesikwele. M kulokhu kuzophinde kube ngaphansi, okubalulekile. Okuthandayo kufanele kunikezwe ku-plasterboard, uma kubalulekile ukufihla ukuxhumana kobunjiniyela noma amaphutha amakhulu ezindongeni. Ukwehliswa okungeziwe nakho kungenzeka uma ufaka le ndaba.
I-plaster ingcono kakhulu ezweni, ngoba ebusika akukho ukushisa okungapheli. Ikamelo elincane, eliqediwe nge-plasterboard, lizoba lincane kakhulu. I-plaster izosindisa indawo kusukela ekunciphiseni. Futhi, eqinisweni, emakamelweni anezinto ezinzima ezindongeni, le nto iyinketho yokuwina.
Lezi yiziphetho. Nquma ukuthi yini efanele kuwe - izindonga zokuhlobisa nge-plaster noma i-plasterboard, thatha ngokwakho. Ukulungiswa okuphumelelayo!
Indlela yokusika ngokushesha umgodi phansi noma ukusika ukhonkolo, ukusika phansi kanye nendawo ngokushesha futhi ngaphandle komhlabathi
Ukuvimbela amanzi egumbini lokugezela ngaphansi kwe-tile ngezandla zakho
Ukupenda nokupenda "Tikkurila Luia"
Pear Rogneda: sici ezihlukahlukene nezithombe
Cognac Distillate: okwenza ekhaya
Ihhotela Arinara Bangtao Beach Resort 4 * (Thailand, Phuket): izithombe kanye nokubuyekeza